လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှ မချယ်ရီပွင့်၏ မ်ိခင်၊ ကလေးငယ်နှစ်ဦး၏ အဘွားနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ...! - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ဖြစ်ရပ်မှန် / လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှ မချယ်ရီပွင့်၏ မ်ိခင်၊ ကလေးငယ်နှစ်ဦး၏ အဘွားနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ...!
လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှ မချယ်ရီပွင့်၏ မ်ိခင်၊ ကလေးငယ်နှစ်ဦး၏ အဘွားနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ...!
Apann Pyay 12:13 PM ပြည်တွင်းသတင်း , ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှ မချယ်ရီပွင့်၏ မိခင်၊ ကလေးနှစ်ဦး၏အဘွား ဒေါ်ရီရီနွဲ့(ဓာတ်ပုံ − မြတ်သီဟမောင်)
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ရွှေနံ့သာကျေးရွာ ပတ္တမြားမြို့သစ် မြအေးချမ်းသာလမ်းရှိ အိမ်တွင် ၂၀၁၆ ဩဂုတ် ၁၉ ရက်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူသတ်မှုသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးစိုးနောင်က သားနှစ်ဦးနှင့် ဇနီးဖြစ်သူကို ဓားဖြင့်ထိုးသတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကုိုယ်ဓားဖြင့် ထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်သည်။ အသတ်ခံရသော မချယ်ရီပွင့်၏ မိခင်၊ ကလေးငယ်နှစ်ဦး၏အဘွားဖြစ်သော ကျန်ရစ်သူဒေါ်ရီရီနွဲ့အား မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်း၏အမြင်ကို ဇွန်လ ၃၀ ရက်တွင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်များမှကောက်နုတ် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
လူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန် ချက်အပေါ် အန်တီဘာပြောချင် ပါသလဲ။
ဇွန်လ ၂၉ ရက် ည ၈ နာရီ သတင်းမှာတီဗီကနေကြေညာ တယ်ဆိုပြီး အသိတွေဖုန်းဆက်ပါ တယ်။ အိမ်မှာဖွင့်ကြည့်တော့ မမီ တော့ဘူး။ မနက်မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှာပါမှ သတင်းဖတ်ရ ပြီး သိရတာပါ။ ဘယ်ရဲဌာနကမှ လာရောက်ပြောဆိုခြင်း မရှိပါ ဘူး။ လူသတ်မှုဖြစ်ပြီး လေးလ လောက်နောက်ပိုင်းကတည်းက ရဲတွေက အဆက်အသွယ်မလုပ် တော့ဘူး။ အခုလိုကြေညာလိုက် တော့ မိသားစုအနေနဲ့ မကျေနပ် ပါဘူး။
ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ယုံ ကြည်ပါသလား။
သားသမီးတွေကို ချစ်တဲ့သူ တစ်ယောက်က ဒီလိုလုပ်စရာအ ကြောင်းမရှိပါဘူး။ သူ့သားတွေ ကို သူဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကတောင် သိပါ တယ်။ အန်တီတို့ကတော့ ရဲတပ် ဖွဲ့က ဘယ်လိုတွေထုတ်ပြန်တယ် ဆိုတာ သတင်းစာဖတ်မှသိရတာ ပါ။ အခုလို ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ ပတ် သက်လို့တော့ မယုံကြည်ဘူး။ အန်တီလည်း ဒီနေ့သတင်းစာဖတ် ပြီးတော့မှ ဆေးတစ်လုံးတောင် ထိုးထားရတယ်။ ဒီလိုတွေ သတင်းဖတ်ပြီး ဒီနေ့ည မအိပ်နိုင် သေးဘူး။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ ဘာ တွေတွေ့ပြီး အခုလိုပြောတာလဲ မသိဘူး။ အမှန်က အန်တီတို့ကိုအသိပေးပြီး မေးမြန်းသင့်တယ်။ အခုလို သတင်းထုတ်ပြန်တာတော့မယုံကြည်ပါဘူး။
လူသတ်မှုမဖြစ်ခင် မိသားစုမှာ ထူးခြားမှု ဘာတွေများရှိပါသလဲ။
လူသတ်မှုမဖြစ်ခင် သုံးလေး ရက်အလိုမှာ အိမ်ကို သူစိမ်းနှစ် ယောက်လာတယ်။ အဲဒီနေ့က အိမ်မှာ အန်တီတစ်ယောက် တည်းရှိတယ်။ ညဘက်သူတို့ လင်မယားပြန်လာတော့ ကလေး သူခိုးတွေလားမသိဘူး။ ကလေး တွေသတိထားဦးလို့ ပြောမိသေး တယ်။ အန်တီအစ်မအိမ်သွားအိပ် ပြီး အိမ်ပြန်လာတဲ့နေ့မှာ သမီးက အမေ့ကို ပြစရာရှိတယ်ဆိုပြီး သူ့ ဖုန်းကိုပြတယ်။ အမေ့အိမ်ကို လာချောင်းတာ ဒီလူတွေလား မေးတယ်။ အန်တီက သုံးယောက် မှာဘေးကနှစ်ယောက်ကတော့ ပါတယ်။ အလယ်က တစ်ယောက် တော့မပါဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်။ စိုးနောင်လည်း အဲဒီအချိန်အိမ်မှာ ရှိတော့ သူ့ကိုတောင်ပြောလိုက် သေးတယ်။ စိုးနောင်က ထား လိုက်အမေရာ၊ ဘယ်ကလူတွေ မှန်းလည်း မသိဘဲနဲ့လို့ ပြန်ပြော သေးတယ်။
ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အကြွေး တင်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ သိ ရပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။
သူ အုတ်သဲကျောက်ယူ ရောင်းတဲ့ဒိုင်မှာ အကြွေးရှိတယ် လို့ပြောတယ်။ အန်တီက ဘယ် လောက်လဲလို့မေးတော့ ၁၇ သိန်း ရှိတယ်။ ဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးက ပါးစပ်ဆိုးတယ်။ အမေပြန်ဆပ်ရ မယ်ပြောတော့ အန်တီကတောင် ဆပ်လိုက်ပေါ့။ ငွေလိုလို့ဆိုပြီး ၀ယ်ထားတဲ့ ထော်လာဂျီကို ၁၂ သိန်းခွဲနဲ့ရောင်းပြီး ၁၀ သိန်းသွား ဆပ်ခဲ့တယ်လို့ လင်မယားနှစ် ယောက်အန်တီ့ကို ပြောတယ်။ အန်တီက ငွေလိုရင်ငါ့မြေကွက် တွေရောင်းပြီး ပေးမယ်တောင် ပြောလိုက်သေးတယ်။ လူသတ် မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း အဲဒီအကြွေး ရှင်ဆိုတဲ့သူတွေလည်း မလာပါ ဘူး။ သတင်းစာထဲမှာတော့ ၂၇ သိန်းရေးထားတာတွေ့တယ်။
သေဆုံးသူ မချယ်ရီပွင့်ခြေ ထောက်မှာ အကြွေးပေးဖို့ရှိတဲ့ သူတွေနာမည်တွေ ရေးပြီး ယ တြာချေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။
အန်တီတို့အိမ်မှာ ယတြာ ချေတဲ့ပစ္စည်းတွေ ဘာမှမရှိပါ ဘူး။ ငွေရေးကြေးရေးလည်း အ ရင်ကတည်းက အန်တီပေးနေ တာပါ။ ဒီဘက်ပြောင်းလာပြီးမှ သူတို့လုပ် ချင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ အန်တီ့ အိမ်ခြံတွေရောင်းပြီး သူ တို့ကို စီးပွားရေးလုပ်ပေးထား တာပါ။ ဒီရပ်ကွက်မှာလည်း အန် တီတို့ ရစရာငွေကြေးတွေ အများ ကြီးရှိတယ်။ သမီးခြေထောက် ပေါ်မှာ ဒေါ်တင်တင်ငြိမ်းဆိုတဲ့ နာမည်ရေးထားတယ်လို့ အ လောင်းကို သူတို့စစ်တဲ့အခါမှာ တွေ့တဲ့အကြောင်း ပြောဖူးပါ တယ်။ ဘယ်ဘက်မှာရေးထားလဲ အန်တီလည်း မသိသလို မြင် လည်း မမြင်လိုက်ရပါဘူး။ ရဲတွေ ပြောမှ ဒီနာမည်ရေးထားတယ်ဆို တာ သိရတာပါ။
မချယ်ရီပွင့်အရက်နဲ့ဝိုင်သောက် လေ့ရှိတယ်လို့ ရဲသတင်းထုတ်ပြန် ချက်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာများပြောချင် ပါသလဲ။
အန်တီ့သမီးအရက်တို့၊ ၀ိုင် တို့မသောက်တတ်ပါဘူး။ ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲညတွေမှာ ညီအစ်မတွေဆုံ တဲ့အခါ ဘီယာတော့ သောက်ပါ တယ်။ မိသားစုတွေပွဲဆိုတာ လည်း အမြဲလုပ်နေတာမဟုတ် ပါဘူး။ ၀ိုင်ပုလင်းနှစ်လုံးကလည်း အန်တီအထက်မြန်မာပြည်ကပြန် လာတော့ လက်ဆောင်ပေးဖို့ ၀ယ်လာတာပါ။ စိုးနောင်ဆိုရင် အရက်၊ ဘီယာ ဘာမှမသောက်ပါ ဘူး။ အိမ်မှာအရက်ပုလင်းထား တာက အလုပ်နဲ့မပတ်သက်လို့ အိမ်ကို ဧည့်သည်တွေလာရင် တိုက်ဖို့ တစ်ခါတလေ၀ယ်ထား တဲ့ဟာတွေပါ။
ဆရာဝန်ဆေးစစ်ချက်မှာ ကိုစိုး နောင်ဟာ ဘယ်သန်လို့ပြောပါ တယ်။ စိတ်အခြေအနေပုံမှန် မဟုတ်တဲ့အတွက် အခုလိုမိသား စုကို ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သုံးသပ် ထားပါတယ်။ ဒီအတွက်အန်တီ့ အနေနဲ့ ဘာများပြောချင်ပါသ လဲ။
ဒီအချက်ကတော့ အထူးလွဲ မှားတဲ့ အချက်လို့တောင်ပြောလို့ ရပါတယ်။ စိုးနောင်ဟာ ညာသန် တစ်ယောက်ပါ။ ဘယ်သန်လည်း မဟုတ်သလို အိမ်မှာလည်း သူက ခပ်အေးအေးနေတတ်တဲ့သူတစ် ယောက်ပါ။ သားသမီးတွေကို ချစ်လား (ဒါမှမဟုတ်) သူတို့လင် မယားတွေ စကားများရန်ဖြစ်လား သိချင်ရင် ရပ်ကွက်ကသူတွေမေး ကြည့်လို့ရပါတယ်။ လင်မယား စကားများတာတော့ အိမ်ထောင် သည်တိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝ ပါ။ အန်တီ့မြေးတွေကလည်း ရိုက်ပြီးဆုံးမဖို့လိုတဲ့ကလေးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲမှာဖြစ် ဖြစ်၊ စာသင်ကျောင်းမှာဖြစ်ဖြစ် ကလေးတွေဘယ်လိုနေလဲ မေး ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဖေကိုယ် တိုင်က မိန်းမနဲ့သားကိုရက်ရက် စက်စက်သတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်သတ်သေတယ်ဆိုဖြစ်နိုင်မ လား စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ (မျက်ရည်များဖြင့် ပြောသည်)
အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ တပ်ဖွဲ့ကို ဘာများပြောချင်ပါသ လဲ။
အန်တီတို့မှာလူလည်းသေ ဆုံးလို့ ဆုံးရှုံးရပြီးပြီ။ အခုသတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ စိုးနောင်က စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးသတ်သလို တွေရေးထားတယ်။ သူ့မှာဘာ ရောဂါမှ မရှိသလိုဘယ်လိုဆေး ခန်းမှလည်း သွားပြရတဲ့သူလည်း မဟုတ်ဘူး။ ရဲထဲကထွက်တော့ လည်း အန်တီတို့မေးပါတယ်။ ဘာလို့ထွက်တာလဲဆိုတော့ မဖြေပါ ဘူး။ သူမလုပ်ချင်လို့ထွက်တာပဲ ပြောတယ်။ အန်တီတို့တောင်တ ကယ်မထွက်ဘဲ ရဲသတင်းပေးပုံစံ လုပ်နေတယ်လို့ ထင်တာပါ။ အိမ်ကိုလာချောင်းတဲ့ အမျိုးသားသုံး ဦးကိုကျတော့ ရှာမတွေ့သေးဘဲနဲ့ အခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာတော့ အန်တီတို့ တစ်မျိုးလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသလို မကျေလည်းမကျေနပ်ပါဘူး။ ဒီအမှုနဲ့ပတ် သက်ပြီး တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်း မေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ သူများကိုသတ်တာတော့ထားပါဦး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဓားနဲ့အဲဒီလိုလေးချက်ထိုးလို့ ရမလားသိချင်တယ်။
လူသတ်မှုမဖြစ်ခင်ကိုစိုးနောင်က ဘာတွေများထူးထူးခြားခြားပြော တာရှိလဲ။
အခုနေတဲ့အိမ်ရောင်းပြီးစိုး နောင် သူ့ဇာတိညောင်လေးပင် ပြန်ချင်တယ်ပြောတယ်။ ဘာလို့ လဲမေးတော့ ဒီမှာအလုပ်အကိုင် တွေအဆင်မပြေဘူးပြောတယ်။ အကြွေးတွေများရှိလားမေးတော့ လည်း မရှိဘူးပြောတယ်။ ဒါ ကြောင့် အန်တီကတောင်ငါရှိတဲ့ မြေကွက်လေးတွေရောင်းပြီးအ လုပ်ထဲငွေထပ်ဖြည့်ပေးမယ်ပြော တော့ သူကရန်ကုန်မှာ မနေချင် တာအမေလို့ပြောတယ်။ အန်တီ ကတောင် (သား)မခေါ်ဖူးပါဘူး။ အဲဒီနေ့ကတော့ခေါ်ပြီး မင်းမှာရန် ငြိုးရန်စတွေရှိလား မေးတော့ လည်းမရှိဘူးပြောတယ်။
အန်တီ့အနေနဲ့ ဘာတွေဆက်လုပ် သွားဖို့ စီစဉ်ထားပါသလဲ။
အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိ သူတွေကို မေးစရာရှိတာတွေမေး မယ်။ ပြီးရင်အိမ်ရှေ့မှာလာပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ သုံးယောက် ဘာလို့ရှာမရတာလဲသိချင်တယ်။ အိမ်ကတော့လှူတာတောင် ယူ မယ့်သူမရှိပါဘူး။ အခုတော့ကျူး ကျော်ဆိုပြီး ဇွန်လ၂၂ ရက်က စမတ်ကတ်ပေးသွားတယ်။ က လေးတွေအတွက် တစ်နှစ်ပြည့် အလှူလုပ်ပေးမယ်။ ပြီးရင်တော့ အန်တီ ကျိုက်ထီးရိုးမှာ မယ်သီလ ရှင်ဝတ်ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ အန်တီတို့လို အဖြစ်မျိုးလည်း ဘယ်မိသားစုမှ မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆု တောင်းတယ်။ အမှုမှန်ဆိုတာ ထက် အဖြစ်မှန်ပေါ်ပါစေလို့ အန် တီကတော့ဆုတောင်းပါတယ်။
လေးလောငျးပွိုငျလူသတျမှုမှ မခယျြရီပှငျ့၏ မိခငျ၊ ကလေးနှဈဦး၏အဘှား ဒျေါရီရီနှဲ့(ဓာတျပုံ − မွတျသီဟမောငျ)
မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျ ရှနေံ့သာကြေးရှာ ပတ်တမွားမွို့သဈ မွအေးခမျြးသာလမျးရှိ အိမျတှငျ ၂၀၁၆ ဩဂုတျ ၁၉ ရကျ၌ ဖွဈပှားခဲ့သော လူသတျမှုသညျ အိမျထောငျဦးစီးစိုးနောငျက သားနှဈဦးနှငျ့ ဇနီးဖွဈသူကို ဓားဖွငျ့ထိုးသတျပွီး ကိုယျ့ကိုယျကုိုယျဓားဖွငျ့ ထိုးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟုစဈဆေးတှရှေိ့ရကွောငျး မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့က ယမနျနကေ့ထုတျပွနျသညျ။ အသတျခံရသော မခယျြရီပှငျ့၏ မိခငျ၊ ကလေးငယျနှဈဦး၏အဘှားဖွဈသော ကနျြရဈသူဒျေါရီရီနှဲ့အား မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့က သတငျးထုတျပွနျခကျြနှငျ့ပတျသကျ၍ ၎င်းငျး၏အမွငျကို ဇှနျလ ၃၀ ရကျတှငျ တှဆေုံ့မေးမွနျးထားသညျမြားမှကောကျနုတျ ဖျောပွလိုကျပါသညျ။
လူသတျမှုနဲ့ပတျသကျပွီး မွနျမာ နိုငျငံရဲတပျဖှဲ့ သတငျးထုတျပွနျ ခကျြအပျေါ အနျတီဘာပွောခငျြ ပါသလဲ။
ဇှနျလ ၂၉ ရကျ ည ၈ နာရီ သတငျးမှာတီဗီကနကွေညော တယျဆိုပွီး အသိတှဖေုနျးဆကျပါ တယျ။ အိမျမှာဖှငျ့ကွညျ့တော့ မမီ တော့ဘူး။ မနကျမွနျမာ့အလငျး သတငျးစာမှာပါမှ သတငျးဖတျရ ပွီး သိရတာပါ။ ဘယျရဲဌာနကမှ လာရောကျပွောဆိုခွငျး မရှိပါ ဘူး။ လူသတျမှုဖွဈပွီး လေးလ လောကျနောကျပိုငျးကတညျးက ရဲတှကေ အဆကျအသှယျမလုပျ တော့ဘူး။ အခုလိုကွညောလိုကျ တော့ မိသားစုအနနေဲ့ မကနြေပျ ပါဘူး။
ဒီသတငျးထုတျပွနျခကျြကို ယုံ ကွညျပါသလား။
သားသမီးတှကေို ခဈြတဲ့သူ တဈယောကျက ဒီလိုလုပျစရာအ ကွောငျးမရှိပါဘူး။ သူ့သားတှေ ကို သူဘယျလောကျခဈြကွောငျး ပတျဝနျးကငျြကတောငျ သိပါ တယျ။ အနျတီတို့ကတော့ ရဲတပျ ဖှဲ့က ဘယျလိုတှထေုတျပွနျတယျ ဆိုတာ သတငျးစာဖတျမှသိရတာ ပါ။ အခုလို ထုတျပွနျခကျြနဲ့ ပတျ သကျလို့တော့ မယုံကွညျဘူး။ အနျတီလညျး ဒီနသေ့တငျးစာဖတျ ပွီးတော့မှ ဆေးတဈလုံးတောငျ ထိုးထားရတယျ။ ဒီလိုတှေ သတငျးဖတျပွီး ဒီနညေ့ မအိပျနိုငျ သေးဘူး။ ရဲတပျဖှဲ့ကတော့ ဘာ တှတှေပွေီ့း အခုလိုပွောတာလဲ မသိဘူး။ အမှနျက အနျတီတို့ကိုအသိပေးပွီး မေးမွနျးသငျ့တယျ။ အခုလို သတငျးထုတျပွနျတာတော့မယုံကွညျပါဘူး။
လူသတျမှုမဖွဈခငျ မိသားစုမှာ ထူးခွားမှု ဘာတှမြေားရှိပါသလဲ။
လူသတျမှုမဖွဈခငျ သုံးလေး ရကျအလိုမှာ အိမျကို သူစိမျးနှဈ ယောကျလာတယျ။ အဲဒီနကေ့ အိမျမှာ အနျတီတဈယောကျ တညျးရှိတယျ။ ညဘကျသူတို့ လငျမယားပွနျလာတော့ ကလေး သူခိုးတှလေားမသိဘူး။ ကလေး တှသေတိထားဦးလို့ ပွောမိသေး တယျ။ အနျတီအဈမအိမျသှားအိပျ ပွီး အိမျပွနျလာတဲ့နမှေ့ာ သမီးက အမကေို့ ပွစရာရှိတယျဆိုပွီး သူ့ ဖုနျးကိုပွတယျ။ အမအေိ့မျကို လာခြောငျးတာ ဒီလူတှလေား မေးတယျ။ အနျတီက သုံးယောကျ မှာဘေးကနှဈယောကျကတော့ ပါတယျ။ အလယျက တဈယောကျ တော့မပါဘူးလို့ ပွောလိုကျတယျ။ စိုးနောငျလညျး အဲဒီအခြိနျအိမျမှာ ရှိတော့ သူ့ကိုတောငျပွောလိုကျ သေးတယျ။ စိုးနောငျက ထား လိုကျအမရော၊ ဘယျကလူတှေ မှနျးလညျး မသိဘဲနဲ့လို့ ပွနျပွော သေးတယျ။
ငှကွေေးနဲ့ပတျသကျလို့ အကွှေး တငျထားတာတှရှေိတယျလို့ သိ ရပါတယျ။ ဟုတျပါသလား။
သူ အုတျသဲကြောကျယူ ရောငျးတဲ့ဒိုငျမှာ အကွှေးရှိတယျ လို့ပွောတယျ။ အနျတီက ဘယျ လောကျလဲလို့မေးတော့ ၁၇ သိနျး ရှိတယျ။ ဆိုငျရှငျအမြိုးသမီးက ပါးစပျဆိုးတယျ။ အမပွေနျဆပျရ မယျပွောတော့ အနျတီကတောငျ ဆပျလိုကျပေါ့။ ငှလေိုလို့ဆိုပွီး ဝယျထားတဲ့ ထျောလာဂြီကို ၁၂ သိနျးခှဲနဲ့ရောငျးပွီး ၁၀ သိနျးသှား ဆပျခဲ့တယျလို့ လငျမယားနှဈ ယောကျအနျတီ့ကို ပွောတယျ။ အနျတီက ငှလေိုရငျငါ့မွကှေကျ တှရေောငျးပွီး ပေးမယျတောငျ ပွောလိုကျသေးတယျ။ လူသတျ မှုဖွဈပွီးနောကျပိုငျး အဲဒီအကွှေး ရှငျဆိုတဲ့သူတှလေညျး မလာပါ ဘူး။ သတငျးစာထဲမှာတော့ ၂၇ သိနျးရေးထားတာတှတေ့ယျ။
သဆေုံးသူ မခယျြရီပှငျ့ခွေ ထောကျမှာ အကွှေးပေးဖို့ရှိတဲ့ သူတှနောမညျတှေ ရေးပွီး ယ တွာခတြေယျလို့ သိရပါတယျ။ ဟုတျပါသလား။
အနျတီတို့အိမျမှာ ယတွာ ခတြေဲ့ပစ်စညျးတှေ ဘာမှမရှိပါ ဘူး။ ငှရေေးကွေးရေးလညျး အ ရငျကတညျးက အနျတီပေးနေ တာပါ။ ဒီဘကျပွောငျးလာပွီးမှ သူတို့လုပျ ခငျြတဲ့ စီးပှားရေးလုပျဖို့ အနျတီ့ အိမျခွံတှရေောငျးပွီး သူ တို့ကို စီးပှားရေးလုပျပေးထား တာပါ။ ဒီရပျကှကျမှာလညျး အနျ တီတို့ ရစရာငှကွေေးတှေ အမြား ကွီးရှိတယျ။ သမီးခွထေောကျ ပျေါမှာ ဒျေါတငျတငျငွိမျးဆိုတဲ့ နာမညျရေးထားတယျလို့ အ လောငျးကို သူတို့စဈတဲ့အခါမှာ တှတေဲ့အကွောငျး ပွောဖူးပါ တယျ။ ဘယျဘကျမှာရေးထားလဲ အနျတီလညျး မသိသလို မွငျ လညျး မမွငျလိုကျရပါဘူး။ ရဲတှေ ပွောမှ ဒီနာမညျရေးထားတယျဆို တာ သိရတာပါ။
မခယျြရီပှငျ့အရကျနဲ့ဝိုငျသောကျ လရှေိ့တယျလို့ ရဲသတငျးထုတျပွနျ ခကျြမှာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒီကိစ်စ နဲ့ပတျသကျပွီး ဘာမြားပွောခငျြ ပါသလဲ။
အနျတီ့သမီးအရကျတို့၊ ဝိုငျ တို့မသောကျတတျပါဘူး။ ပြျောပှဲ ရှငျပှဲညတှမှော ညီအဈမတှဆေုံ တဲ့အခါ ဘီယာတော့ သောကျပါ တယျ။ မိသားစုတှပှေဲဆိုတာ လညျး အမွဲလုပျနတောမဟုတျ ပါဘူး။ ဝိုငျပုလငျးနှဈလုံးကလညျး အနျတီအထကျမွနျမာပွညျကပွနျ လာတော့ လကျဆောငျပေးဖို့ ဝယျလာတာပါ။ စိုးနောငျဆိုရငျ အရကျ၊ ဘီယာ ဘာမှမသောကျပါ ဘူး။ အိမျမှာအရကျပုလငျးထား တာက အလုပျနဲ့မပတျသကျလို့ အိမျကို ဧညျ့သညျတှလောရငျ တိုကျဖို့ တဈခါတလဝေယျထား တဲ့ဟာတှပေါ။
ဆရာဝနျဆေးစဈခကျြမှာ ကိုစိုး နောငျဟာ ဘယျသနျလို့ပွောပါ တယျ။ စိတျအခွအေနပေုံမှနျ မဟုတျတဲ့အတှကျ အခုလိုမိသား စုကို ပွုလုပျခဲ့တယျလို့ သုံးသပျ ထားပါတယျ။ ဒီအတှကျအနျတီ့ အနနေဲ့ ဘာမြားပွောခငျြပါသ လဲ။
ဒီအခကျြကတော့ အထူးလှဲ မှားတဲ့ အခကျြလို့တောငျပွောလို့ ရပါတယျ။ စိုးနောငျဟာ ညာသနျ တဈယောကျပါ။ ဘယျသနျလညျး မဟုတျသလို အိမျမှာလညျး သူက ခပျအေးအေးနတေတျတဲ့သူတဈ ယောကျပါ။ သားသမီးတှကေို ခဈြလား (ဒါမှမဟုတျ) သူတို့လငျ မယားတှေ စကားမြားရနျဖွဈလား သိခငျြရငျ ရပျကှကျကသူတှမေေး ကွညျ့လို့ရပါတယျ။ လငျမယား စကားမြားတာတော့ အိမျထောငျ သညျတိုငျးဖွဈတတျတဲ့သဘာဝ ပါ။ အနျတီ့မွေးတှကေလညျး ရိုကျပွီးဆုံးမဖို့လိုတဲ့ကလေးတှေ မဟုတျပါဘူး။ ရပျကှကျထဲမှာဖွဈ ဖွဈ၊ စာသငျကြောငျးမှာဖွဈဖွဈ ကလေးတှဘေယျလိုနလေဲ မေး ကွညျ့လို့ရပါတယျ။ အဖကေိုယျ တိုငျက မိနျးမနဲ့သားကိုရကျရကျ စကျစကျသတျပွီး ကိုယျ့ကိုယျ ကိုယျသတျသတေယျဆိုဖွဈနိုငျမ လား စဉျးစားစခေငျြပါတယျ။ (မကျြရညျမြားဖွငျ့ ပွောသညျ)
အမှုနဲ့ပတျသကျလို့ မွနျမာနိုငျငံရဲ တပျဖှဲ့ကို ဘာမြားပွောခငျြပါသ လဲ။
အနျတီတို့မှာလူလညျးသေ ဆုံးလို့ ဆုံးရှုံးရပွီးပွီ။ အခုသတငျး ထုတျပွနျခကျြအရ စိုးနောငျက စိတျဖောကျပွနျပွီးသတျသလို တှရေေးထားတယျ။ သူ့မှာဘာ ရောဂါမှ မရှိသလိုဘယျလိုဆေး ခနျးမှလညျး သှားပွရတဲ့သူလညျး မဟုတျဘူး။ ရဲထဲကထှကျတော့ လညျး အနျတီတို့မေးပါတယျ။ ဘာလို့ထှကျတာလဲဆိုတော့ မဖွပေါ ဘူး။ သူမလုပျခငျြလို့ထှကျတာပဲ ပွောတယျ။ အနျတီတို့တောငျတ ကယျမထှကျဘဲ ရဲသတငျးပေးပုံစံ လုပျနတေယျလို့ ထငျတာပါ။ အိမျကိုလာခြောငျးတဲ့ အမြိုးသားသုံး ဦးကိုကတြော့ ရှာမတှသေ့ေးဘဲနဲ့ အခုလိုထုတျပွနျလိုကျတာတော့ အနျတီတို့ တဈမြိုးလုံးစိတျမကောငျးဖွဈရသလို မကလြေညျးမကနြေပျပါဘူး။ ဒီအမှုနဲ့ပတျ သကျပွီး တာဝနျရှိသူတှကေိုလညျး မေးဖို့စီစဉျထားပါတယျ။ သူမြားကိုသတျတာတော့ထားပါဦး။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဓားနဲ့အဲဒီလိုလေးခကျြထိုးလို့ ရမလားသိခငျြတယျ။
လူသတျမှုမဖွဈခငျကိုစိုးနောငျက ဘာတှမြေားထူးထူးခွားခွားပွော တာရှိလဲ။
အခုနတေဲ့အိမျရောငျးပွီးစိုး နောငျ သူ့ဇာတိညောငျလေးပငျ ပွနျခငျြတယျပွောတယျ။ ဘာလို့ လဲမေးတော့ ဒီမှာအလုပျအကိုငျ တှအေဆငျမပွဘေူးပွောတယျ။ အကွှေးတှမြေားရှိလားမေးတော့ လညျး မရှိဘူးပွောတယျ။ ဒါ ကွောငျ့ အနျတီကတောငျငါရှိတဲ့ မွကှေကျလေးတှရေောငျးပွီးအ လုပျထဲငှထေပျဖွညျ့ပေးမယျပွော တော့ သူကရနျကုနျမှာ မနခေငျြ တာအမလေို့ပွောတယျ။ အနျတီ ကတောငျ (သား)မချေါဖူးပါဘူး။ အဲဒီနကေ့တော့ချေါပွီး မငျးမှာရနျ ငွိုးရနျစတှရှေိလား မေးတော့ လညျးမရှိဘူးပွောတယျ။
အနျတီ့အနနေဲ့ ဘာတှဆေကျလုပျ သှားဖို့ စီစဉျထားပါသလဲ။
အမှုနဲ့ပတျသကျလို့တာဝနျရှိ သူတှကေို မေးစရာရှိတာတှမေေး မယျ။ ပွီးရငျအိမျရှမှေ့ာလာပွီး ဓာတျပုံရိုကျနတေဲ့ သုံးယောကျ ဘာလို့ရှာမရတာလဲသိခငျြတယျ။ အိမျကတော့လှူတာတောငျ ယူ မယျ့သူမရှိပါဘူး။ အခုတော့ကြူး ကြျောဆိုပွီး ဇှနျလ၂၂ ရကျက စမတျကတျပေးသှားတယျ။ က လေးတှအေတှကျ တဈနှဈပွညျ့ အလှူလုပျပေးမယျ။ ပွီးရငျတော့ အနျတီ ကြိုကျထီးရိုးမှာ မယျသီလ ရှငျဝတျဖို့ စဉျးစားထားပါတယျ။ အနျတီတို့လို အဖွဈမြိုးလညျး ဘယျမိသားစုမှ မဖွဈပါစနေဲ့ဆု တောငျးတယျ။ အမှုမှနျဆိုတာ ထကျ အဖွဈမှနျပျေါပါစလေို့ အနျ တီကတော့ဆုတောငျးပါတယျ။